3 Zvidzidzo Zvemukati Vatengesi Vanofanira Kudzidza kubva kuRetail Martech Zone
Erin Sparks anomhanya Edge yeWebhu radio, iyo podcast isu tinotsigira uye tinotora chikamu muvhiki rega rega. Erin neni takave shamwari dzakanaka pamusoro pemakore uye takave nekukurukurirana kunoshamisa vhiki rino. Ini ndanga ndichikurukura rinouya ebook randakanga ndanyorera Meltwater izvo zvichaburitswa munguva pfupi iri kutevera. Mune iyo ebook, ini ndinoenda mune yakadzama tsananguro nezve dambudziko rekugadzira zvemukati zvekushambadzira zano uye kuyera mhedzisiro yaro.
Imwe pfungwa iri kutenderera mumusoro mangu ndeye chaizvoizvo kukudziridza seti yefa, neimwe yedhongi iri a chakasiyana chinhu chakashandiswa kune imwe nhaurwa. Tenderedza dhayeti uye sarudza kona yaunonyora zvirimo… pamwe infographic ine chokwadi, nyaya yenyaya, uye kushevedzera kuita. Kana podcast ine influencer iyo inogovera mamwe akasarudzika cast cast. Kana pamwe iri interactive Calculator pane ino saiti iyo inobatsira kuona kudzoka kwekudyara.
Chikamu chega chega chemukati chinogona kunge chiri pamusoro wenyaya mumwe chete, asi iwe unogona kufungidzira kuti sei - zvine hungwaru - chidimbu chimwe nechimwe chakasarudzika uye chinobata chinangwa chevamwe vateereri. Rolling dice, chokwadika, haisi iyo chaiyo nzira yakangwara yekufungidzira uye kuburitsa zvine musoro zvemukati zvinogadzira mhedzisiro yebhizinesi inodiwa. Izvo zvinondiunza kune yekutengesa.
Mwanasikana wangu, Kait Karr, yakashanda kuchitoro chekutengesa runako kwemakore akati wandei. Akafarira basa iri, uye rakamudzidzisa toni nezve zvekutengesa uye nemabatirwo andaimboitwa nzira dzemukati memakore. Semaneja anotambira, mwanasikana wangu ndiye aiona nezvechigadzirwa chose chaipinda muchitoro, aive achitarisira kuverenga, uye achitarisira zvekushambadzira zviratidziro muchitoro.
Zvitoro Zvekutengesa Zvemukati Vatengesi
Inventory - Sevashanyi vezvitoro pavanogumbuka apo chitoro chisina chigadzirwa chavari kutsvaga, uri kurasikirwa nevatengi nekuti hauna zvirimo pane yako saiti izvo tarisiro iri kutsvaga. Isu hatidi kutarisa marongero ekushambadzira zvemukati sekutora hesera nekuti vashambadzi vanowanzo, panzvimbo pezvo, vazvione sezvavanofamba. Nei zvakadaro? Nei vatengesi vezvinhu vasingagadzire runyorwa runogoneka rwezviri mukati? Panzvimbo pekubvunza kuti mangani mablog mablog pavhiki makambani anofanirwa kunge ari kutsikisa, nei vasiri vezvinhu vashambadzi vari kutanga tarisiro yeiyo huwandu hwehuwandu hwezvinyorwa kunodiwa?
Audits - Panzvimbo pekugadzira zvemukati makarenda ayo anotsanangudza zvinozivikanwa zvinyorwa zvekunyorera mwedzi unotevera, nei isu tisiri, pachinzvimbo, tichiita gadziriro yekuongorora pakati pezvinyorwa zvinodiwa uye nezvakatoburitswa kare? Izvi zvichave nechokwadi chekudzokorora kushoma uye kubatsira kuburitsa zvirimo. Zvakawanda sekuvaka imba, furemu inogona kutanga yavakwa, kwozoti ma-sub-system, uye pakupedzisira kushongedzwa!
kushambadza - Kunyange hazvo chitoro chiine toni yezvigadzirwa, chitoro chinosarudza kutarisa kusimudzira kwavo zvigadzirwa zvinobatsira kana zvitsva mwedzi wega wega. Vashandi vanodzidziswa, mishandirapamwe inogadzirwa, zvigadzirwa zvigadzirwa zvakagadzirwa, uye omni-chiteshi zano rekusimudzira zvirimo zvakagadzirwa kuti zviwedzere purofiti uye mhedzisiro. Nekufamba kwenguva, sezvo zvigadzirwa uye zvinopihwa zvichitenderedzwa, chitoro yakanaka-tunes mameseji uye kukwidziridzwa kuti urambe uchiwedzera bhizinesi mhedzisiro.
Neichi chikonzero, isu tinofanirwa kusiyanisa kunyora kubva kushambadziro yezvinyorwa. Mumwe munhu ane anoshamisa kopi yekunyora uye yekunyora tarenda hazvireve kuti ivo vane njere inodiwa pakuverenga, kuongorora, uye kukudziridza kukwidziridzwa kune rako bhizinesi. Iyi infographic kubva kuUberflip inofamba kuburikidza nehunhu hwese hwevabudisi vevatengesi vezvinhu.
Chikamu chinyorwa: Ini ndinokuchengeta iwe uchitumirwa pane iyo kufa uye ebook!
Tags: zvemukati zvemabhukuzvemukati zvinyorwazvemukati mushambadzizvemukati mushambadzi infographiczvemukati zvemusika hunhukusimudzira zvemukatihire zvemukati mushambadzichitorouberflip